Delta Chat: Barnaamijka Fariimaha Bilaashka ah ee Furan ee Fariimaha | Laga soo bilaabo Linux
Maalmahan oo aad u walaac farsamo, gaar ahaan marka la eego amniga kombiyuutarka, asturnaanta iyo magac la'aanta, wararka ku saabsan cilladaha ama nuglaanta isgaarsiinta iyo / ama codsiyada farriinta, sida, WhatsApp, Beddel aad u xiiso badan ayaa soo baxaya, oo loo yaqaan deltachat.
Xiiso leh, maxaa yeelay deltachat waa cusub Codsi fariin, taas oo ka duwan kuwa kale ee aadka loo jecel yahay, ku soo dir fariimahaaga emayl, la xareeyay haddii ay suurtagal tahay, oo leh Si toos ah. Waxyaabaha kale dhexdooda, uma baahna isticmaaleyaasheeda inay isdiiwaangaliyaan meel ama goob, maaddaama, koontada emaylka jira, adeeggooda loo isticmaali karo.
Waxaan dhawaan soo dhajinay mid kale oo xiiso leh Codsi fariin, bedel ahaan telegraam o WhatsAppwacid Kalfadhiga. Waa kuwee, kuwan ka duwan, maxaa yeelay:
deltachat, sidoo kale wuxuu leeyahay astaamo baahsan, maadaama ay leedahay a xakamaynta dhexeSi kale haddii loo dhigo, waxay isticmaashaa nidaamka isgaarsiinta ee ugu ballaaran, ugu kala duwan uguna baahsan abid abid abuuray: shabakadda jirta ee server-yada emailka.
1.2 Ku rakibida GNU / Linux
Waa horumar software bilaash ah iyo ilo furan.
Delta Chat waxay bixisaa sheeko deg deg ah iyo isdhaafsi u dhexeeya qalabka.
Farsamo ahaan, waa codsi emayl laakiin leh isweydaarsi casriyeysan oo casri ah.
Dira farriimaha (emayllada) adoo adeegsanaya koontada emaylka isticmaalaha iyo adeeg bixiyaha.
Waxay u dejisaa sirta dhammaadka-dhamaadka si otomaatig ah markay isticmaaleyaashu bilaabaan inay la xiriiraan midba midka kale.
Waxay bixisaa wada sheekeysi kooxeed oo tijaabo ah oo dammaanad ka qaadaya dhamaadka illaa dhammaadka sirta si looga badbaado adeeg bixiyaha firfircoon ama weerarada shabakadda.
Nota: Ku saabsan sirta, waa in la ogaadaa in encryption-ilaa-dhamaadka ma aha oo kaliya ka shaqeeya inta u dhaxaysa codsiyada deltachat, laakiin sidoo kale codsiyada kale ee emaylka haddii ay la jaan qaadayaan Heerka sirta Autocrypt Heerka 1.
Ku saabsan annaga Nidaamka Howlgalka GNU / Linux, deltachat waxay bixisaa feylasha rakibida qaab ahaan .deb y AppImage, qiyaastii 70 MB y 107 MB siday u kala horreeyaan, oo hadda ka kooban version deggan 1.0.0, dhawaan la sii daayay bishii Diseembar ee la soo dhaafay. Sidoo kale, waxaa laga heli karaa gudaha Flatpak iyo meelaha lagu kaydiyo AUR waayo, Arch Linux. Maxaa ka dhigaya rakibiddiisu mid aad u fudud oo la jaanqaadaysa qaar badan oo ka mid ah qaybintayada hadda jira.
para Android, deltachat, ayaa laga heli karaa noocyo iyo cabbirro kala duwan, iyadoo loo eegayo nooca qalabka iyo nooca nidaamka qalliinka loo adeegsaday.
Ugu dambeyntii, waxay leedahay a degel rasmi ah aad u dhameystiran, fudud, iyo Isbaanish. Waxay ka kooban tahay macluumaad aad u qiimo badan oo faahfaahsan, oo loo qaybiyey qaybo, sida: Soo dejiso, Blog, Taageero, Su'aalaha la Weydiiyo iyo Madasha. Iskusoo wada duuboo, isagu Qeybta Su'aalaha Waxay ka kooban tahay macluumaad badan oo khuseeya oo la cusbooneysiiyey oo ku saabsan arjiga, kaas oo kaa caawin doona inaad si qoto dheer u fahamto hawlgalkiisa, shaqadiisa iyo ujeeddooyinkeeda.
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan «Delta Chat», Codsi fariin xiise leh oo ammaan ah, bilaash ah oo furan, kaas oo leh astaamo mudan in la tixgeliyo si loogu beddelo kuwa kale ee caanka ah sida Telegram ama WhatsApp, waad ku mahadsan tahay xaqiiqda ah inay ka fogaanayso raadinta oo aysan lahayn kontarool dhexe, waa dan iyo faa iido weyn, guud ahaan «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Delta Chat: Barnaamijka fariimaha e-maylka oo bilaash ah oo furan
RLBox, tiknoolajiyadda go'doonsiga maktabadda cusub ee ay adeegsatay Mozilla
Ka taxaddar haddii aad lacag ku bixiso Google Pay adoo adeegsanaya lacagahaaga Paypal